Qoowmiyada Sidaamo ee Itoobiya oo u codeynaya Afti Ismaamul | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Qoowmiyada Sidaamo ee Itoobiya oo u codeynaya Afti Ismaamul
Qoowmiyada Sidaamo ee Itoobiya oo u codeynaya Afti Ismaamul
Isku dayga ay qowmiyadda Sadima ku doonayaan inay is-maamul ku helaan, ayaa bishii July horseeday deganaansho la’aan socotay maalmo oo tobaneeyo qof ay ku dhinteen, kuna qasabtay dowladda dhexe inay maamulka gobolka hoos geyso ciidamada federaalka.
Magaalada caasimadda goboleedka ah ee Hawassa, qaar ka mid ah shacabka ayaa ka walaacsan in xiisadahaas ay dib usoo laabtaan, hase yeeshee Cherinet Deguye oo ka mid ah dadka degan halkaas ayaa sheegay in rabshadaha ay aqbali karaan haddii aftida lagu ansixiyo in bulshada Sadima ay hesho Is-maamul.
Aftida ayaa taaban doonta arrinta Is-maamulka, oo ah aas-aaska nidaamka federaalka Itoobiya ee awood ay ayaga isku maamulaan siiya qowmiyadaha kala duwan ee dalkaas, oo ay ku nool yihiin in ka badan 100 milyan oo qof.
Itoobiya ayaa hadda waxaa ka jira sagaal maamul goboleed. Datsuurka ayaa dhigaya in dowladda federaalka ah ay tahay inay abaabusho afti kasta oo qowmiyad ay ku dooneyso inay ku noqoto Is-maamul.
Xitaa haddii aftidan ay meel-marto islamarkaana natiijada la aqbalo, waxay horseedi kartaa in qowmiyado kale ay qaadaan tallaabo noocaas ah, taasi oo sare usii qaadi karta xiisadaha qowmiyadeed ee dalkaas.
Ugu yaraan 10 qowmiyad oo degan koonfurta dalkaas ayaa gudbistay codsi ay ku doonayaan inay ku noqdaan is-maamul.